August 2019 – Page 8
Waxaa Soo Badanaya Cabsida Laga Qabo inay Doorasahada Jubbaland Saabto dagaal Sokeeye iyo Dhiig Ku daata kadib Khilaaf Baahsan ee Ka Jira ,Taasi oo U Badan Dowlada faderalka Soomaaliya Iyo Maamulka Jubbaland ee uu Hogaamiyo […]
Khilaafkii Ugu Cuslaa Ayuu Ka Dhex Abuurtay Doorashada Jubbaland Wadamada Itoobiya Iyo kenya Sida wararka Sheeganayaan,waxayna Kala Tageerayaan Dowlada Faderalka Iyo Maamulka Jubbaland Taasi oo Sababtay Inay Labada Dal Khilaaf Toos Soo Dhex Galo. Kismaayo […]
Wararkii ugu dambeeyey Jubbaland iyo Xaaladdaha Ammaanka.
KISMAAYO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore, waxaana caawa maqribkii bandow lagu soo rogay gabi ahaanba magaalada. Ciidamada ammaanka ayaa xoray jidadka muhiimka ah ee […]
DAAWO: Wararkii ugu dambeeyey ee Jubbaland, Amniga oo la adkeeyey, Goobo la xiray & Musharaxin welwelsan.
MUQDISHO(P-TIMES) – Amarkii ka soo baxay guddiga Nabadgalyadda ee Jubbaland ayaa kadhaqan-galay magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland, waxaana la adkeeyey ammaanka oo dhan, iyadoo ciidamo badan lasoo dhigay jidadka muhiimka ah ee magaalada. Sidaas […]
Kenya oo ka guuleystay Jabuuti, heshayna Xubinta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay.
NAIROBI(P-TIMES) – Dawladda Kenya ayaa ka guuleysatay dalka Jamhuuriyada Jabuuti, waxayna si toos ah hadda Kenya u heshay Xubinimada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay. Talaabada ay guushu ku raacday dalka Kenya waxay heshay 37 cod […]
KISMAYO(P-TIMES) – Saan-saan colaadeed oo ku wajahan xaaladda Jubbaland, gaar ahaana ay isku hayaan ciidamada dalalka Kenya & Itoobiya, waxaana halisaha ugu waa weyn kamid ah dhaqdhaqaaqyada hadda kasocda magaalada Kismaayo. Doorashada Jubbaland ayaa is […]
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay ciidamada Amniga ee Jubbaland is hor istaag ku sameeyeen ciidamada Itoobiya ee kusugan magaaladaas oo doonayay in ay galaan dekeda […]
HARGEYSA(P-TIMES) – War qoraal ah oo ka soo baxay Maamulka Somaliland, kuna qornaa Luuqada Englishka ayaa si adag uga hadlay dagaal hubeysan oo shalay dhexmaray Puntland iyo Somaliland, kaas oo ka dhacay deegaanka Hadaaftimo ee […]
XOG DEG DEG HA+DAAWO: Wasiirka Arrimaha dibada, Taliyayaasha ciidamada Sirdoonka, Milateriga Kenya oo tagay Kismaayo, maxayse kala hadleen Axmed Madoobe?
August 21, 2019 NEWS 2
KISMAAYO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa ogaaday in wafdi sare oo kasocda dalka Kenya ay 2dii maalmood ee lasoo dhaafay booqasho qarsoodi ah ku tageen magaalada Kismaayo, waxaana hogaaminaysay wasiirka Arrimaha dibada ee dalkas, iyadoo ay […]
Golaha Ammaanka ee QM oo kulan ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya maanta & Ergayga oo hortagaya.
NEW YORK(P-TIMES) – Golaha Ammaanka ee Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa ayaa maanta kulan gaar ah ka yeelanaya arrimaha Soomaaliya, gaar ahaana waxay ka hadlayaan ammaanka, Doorashooyinka iyo marxaladihii u dambeeyey. Golaha ayaa warbixin ka dhageysan […]
XOG: Taliyaha AMISOM ee u dhashay Itoobiya miyaa loo diiday in uu tago Kismaayo?
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalooyinka Muqdisho & Kismaayo ayaa sheegaya in Taliyaha ugu sareeya ciidamada AMISOM ee kusugan Soomaaliya una dhashay dalka Itoobiya ee lagu magacaabo Lt. Gen. Tigabu Yilma Wondimhunegn, uu dib […]
XOG: Xaggee ku dambeeyey Madaxweyne Farmaajo, oo 3 maalin ka hor u dhoofay dalka Jabuuti.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sadex maalin ka hor u dhoofay dalka Jamhuuriyada Jabuuti, halkaas oo kulamo kula yeelanaya qaar kamid ah madaxda dalkaas oo ay ka wada hadeen arrimaha labada dhinac […]
DEG DEG: Wararkii ugu dambeeyey Xaaladda Jubbaland & Jidka oo ay ciidamo buux-dhaafiyeen.
KISMAAYO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay jidadka oo dhan saaka lasoo dhigay ciidamadii ugu badnaa oo ka shaqeynaya sugida ammaanka ee magaalada, sidaas oo kalena ciidamada […]
Jubbaland oo xirtay Cirka, dhulka iyo Badda deegaanadeeda.
KISMAYO(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo agaraya magaalada Kismaayo ayaa cadeynaya in ay guddiga amniga Jubbaland soo saareen go’aamo adag oo kuwajaha ammaanka. Jubbaland ayaa xirtay badda, cirka, dhulka waxaana la hakiyey dhamaan kulamada […]
Munaasabad balaaran oo lagu xusayay 21 sanno guuradii kasoo wareegtay markii la asaasay Puntland ayaa lagu qabtay gobalka Ohio ee dalka Mareykanka, waxaana xuskan ka qeybgalay xubno kala duwan oo kusugan gobalkaas, waxaana laga jeediyey […]
August 20, 2019 shiine maxamed 0
XOG: AMISOM oo dhexda u taagan marxalad halis ah & Mustaqbalkooda oo kuxiran sida Kismaayo.
August 20, 2019 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa waqtigan ku jira marxalad adag, waxaana hoggaanka u haysa dalka Itoobiya oo doonaysa in ay faragalin ku sameyso arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland, waxaana halista weyn ee wajahaysaa […]
M/weyne kuxigeenka Puntland oo si adag uga yimi wada hadal laga galo SSC
GAROOWE(P-TIMES) Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray wuxuj si adag uga soo horjeestay baaqii Madaxweynaha Puntland ee kuwajhnaa arrimaha gobalada Sool iyo Cayn. Madaxweyne Kuxigeenka oo xiganaya Dastuurka Puntland ayaa […]
SAWIRRO: Dagaal dhexmaray Puntland iyo Somaliland, Khasaare kadhashay.
BARAN(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Hadaaftimo ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in ay dagaalo kadhaceen halkaas kuwaas oo dhexmaray ciidamo ka kala socda Puntland iyo Somaliland. Wararka ay helayso PuntlandTimes ayaa sheegaya in dhimashada […]
AKHRISO: M/weynaha Jubbaland muxuu ku eegay Khudbadda uu jeediyey?
Madaxweynihii Hore ee Dowlad Gobaleedka Jubbaland ahna Musharax Axmed Maxamed Islaam (A. Madoobe), ayaa Goor-dhaweyd Khudbadiisa Musharaxnimo u jeediyay Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland, ayaa ka hadlay Guulihii Xukuumaddiisu ay gaartay, Caqabadihii ka hor yimid […]